वैज्ञानिकले गरे कमाल : अब खराब फोक्सो फेरी जीवित हुने – Sanchar Patrika
July 22, 2020 236
काठमाडौं । विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरसको बारेमा विशेषज्ञहरुले फोक्सो र हृदयको रोगका बिरामीलाई धेरै खतरा हुने बताउने गरेका छन् ।कोरोना भाइरसले फेक्सो र हृदयलाई क्षतिग्रस्त बनाउने वैज्ञानिकहरुले बताएका हुन् । यसैबीच वैज्ञानिकले एक ठूलो सफलता हात पारेका छन् ।
उनीहरुले फोक्सो पुरा खराब भएपछि पनि स्वस्थ बनाउने तरिका पत्ता लगाएका छन् । यो आफैमा एक ठूलो सफलता भएको वैज्ञानिकहरुको भनाई छ । वैज्ञानिकहरु भन्छन् कि,दानमा मिलेको फोक्सो केहि घण्टामै खराब हुन्छ ।नयाँ शोधपछि अब पहिला भन्दा धेरै फोक्सो उपलब्ध हुन सक्छन् । यो विषयमा जानकारी दिँदै न्यूयोर्क यूनिभर्सिटीमा फोक्सो ट्रान्सप्लान्टका विशेषज्ञ डा. ज्याकरी एन कोनले एक पत्रिकासँग कुरा गर्दै भने, यो एक परिवर्तनकारी विचार हो, जसबाट रोगीको ज्यान बच्नेछ ।
यसरी गरियो शोध
जानकारीका अनुसार कोलम्बिया र भेन्डरबिल्ट यूनिभर्सिटीका शोधकर्ता पछिल्लो आठ वर्ष यता खराब फोक्सोलाई फेरी स्वस्थ गर्नेको काम गरिरहेका थिए । ताजा शोधका अनुसार उनीहरुले फोक्सोलाई श्वास दिनको लागि प्लास्टिकको फरक फरक बक्समा राखेर एक रिस्परेटरबाट जोडेका थिए ।
फेरी त्यसलाई जीवित सुँगुरको घाँटी र बडीका केहि नलीमा जोडिदिएका थिए । जसबाट उसको रक्त बाहिकाको माध्यमबाट फोक्सोमा बग्न थाल्यो । फेरी एक दिन काम गर्न छोडेको एक फोक्सोले काम गर्न थाल्यो र प्रयोगशालामा पूर्ण स्वस्थ् पाइयो ।
मानिसमा प्रयोग हुने
यो टेक्नीक एक्स वीवो लङ्ग परफ्यूजन (ईभीएलपी) नाम दिइएको छ । यसको प्रयोग अब मानिसमा हुँदैछ ।
२८ प्रतिशत फोक्सो मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ
अमेरिकी लंग एसोसिएशनका अनुसार दानमा मिलेका मात्र २८ प्रतिशत फोक्सो मात्रै काममा आउँछन् ।किनभने अन्य फोक्सो मात्र केहि घण्टाको लागि मात्रै प्रयोगमा आउँछन् । छिटै त्यसको प्रयोग नहुँदा बिग्रिने गर्दछन् ।शोधमा सहभागी रहेका वेन्डरबिल्ट यूनिभर्सिटीका डा. म्याथ्यू डब्ल्यूका अनुसार यदि दान गरेका ४० प्रतिशत फोक्सोमा प्रत्योरोपित हुन सके धेरै रोगीहरु प्रतिक्षाको सूचीमा बस्न आवश्यक रहँदैन ।
Prevदुबईमा मालामाल यी नेपाली चेली !
Nextराष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरुलाई परीक्षासम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सुचना ।।
आज सिजन ३ को ग्रान्ड फिनाले : को बन्ला नेपाल आइडल ?
२०७७ साल असोज २३ गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल